ब्रेकफास्ट नगरेपछि हुनसक्छ यी समस्या | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
ब्रेकफास्ट नगरेपछि हुनसक्छ यी समस्या
स्वास्थ्य रहको लागि र बचनको लागि समय समयमा भोजन ग्रहण गर्नु पर्छ । तर एकसाथ धेरै होइन, बरु थोरै-थारै पटक-पटक खाना खानुपर्छ । खाना खाने समय मिलेन भने त्यसबाट पोषण प्राप्त हुने त होइन, बरु स्वास्थ्य समस्या ल्याउँछ । त्यसबाट अपच, ग्याष्ट्रिक आदि खानपानकै तालमेल नमिल्दा हुने समस्या आउने गर्दछ ।
खानपानमा पनि नास्ताको आफ्नो छुटै भूमिका रहेको छ । नास्ता अर्थात बिहानको भोजन जसले हाम्रो शरीरलाई दिनभर आवश्यक इनर्जी प्रधान गर्ने गर्दछ । त्यसैले बिहान नास्ता गर्नैपर्छ । पश्चिमा मुलुकमा यसलाई खानपान संस्कारकै हिस्सा बनाइएको छ । उनीहरु अनिवार्य ब्रेकफास्ट लिन्छन् । हामीकहाँ भने बिहानी भने दुध चियाबाट सुरु हुन्छ । धेरैले त बिहानको नास्ता लिदैनन् ।
बिहानको नास्ता सेवन नगर्दा के हुन्छ त ?
यदि बिहानको नास्ता गरिएन भने त्यसले शरीरमा एकदमै नकारात्मक असर गर्छ ।
टाइप २ मधुहको खतरा
अहिलेका पुस्ता खानपानमा एकदमै लापरबाही छन् । यसले स्वास्थ्य समस्या पैदा गर्छ । खासगरी बिहानको नास्ता नगर्दा टाइप-२ मधुमेहको खतरा हुन्छ ।
दिनभर चुस्त रहनका लागि खाना आवश्यक हुन्छ । यसमा पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ, बिहानको नास्ता ।
स्मरण क्षमता सही
जब हामी समयमा नास्ता गर्छौ, हाम्रो मस्तिष्क स्वस्थ्य हुन्छ । यसले गर्दा स्मरण क्षमता सही हुन्छ ।
न्युन रक्तचापको समस्या
यदि नियमित नास्ता गरिएन भने न्युन रक्तचापको खतरा हुन्छ । दृष्टि कमजोर हुनसक्छ । शरीरमा कमजोरी अनुभव हुन्छ । त्यसैले बिहानको नास्ता गर्नैपर्छ ।
चिडचिडापन कम हुन्छ
यदि समयमा नास्ता गरिएन भने चिडचिडापनको समस्या हुन्छ । यसले डिप्रेसनको समस्या निम्त्याउँछ । त्यसैले बिहान नास्ता गर्नुपर्छ ।
नराखौ लामो ग्याप
खानेकुरा सेवन गर्ने समयतालिका निश्चित गरौ । लामो ग्यापमा खानेकुरा सेवन गर्नु फाइदाजनक हुँदैन । कम्तिमा हरेक तीन घण्टाको अन्तरमा खानेकुरा सेवन गर्नुपर्छ । यसले गर्दा शरीरमा कुनै समस्या आउँदैन ।
यदि खानपानमा लामो ग्याप भयो भने त्यसले एसिडिटी वा पाचन सम्बन्धी समस्या ल्याउँछ । शरीरको प्रतिरक्षा क्षमता पनि कमजोर हुन्छ ।
के खाने नास्तामा ?
बिहान भरपेट नास्ता खाने भन्दैमा जस्तोसुकै खानेकुरा उपयुक्त हुँदैन । जंकफूड, प्याकेटको खानेकुरा, चिल्लो, मसलेदार खानेकुराले पाचन यन्त्रमा असर गर्छ ।
बिहानको नास्तामा उच्च फाइबर र लो कार्बोहाइड्रेटयुक्त खानेकुरा सामेल गर्नुपर्छ । यस किसिमको खानाले दिनभर शरीर फूर्तिलो हुन्छ ।